Dawladda Suuriya oo qabsatay 70% bariga Xalab - BBC Somali
Dawladda Suuriya oo qabsatay 70% bariga Xalab
Image caption Duqayn loo gaystay bariga Xalab.
Ciidanka Suuriya ayaa la sheegayaa inay goobo hor leh ku qabsanayaan dagaalka ay kala hor jeedaan fallaagada ee gacan ku haynta Xalab.
Koox arrimaha Suuriya la socota oo fadhigeedu yahay Britain ayaa sheegtay in ciidanka dawladdu ay qabsadeen 5 degmo oo dheeraad ah, oo ay ku jirto degmada istaraatijiga ah ee Al Shacar. Askartu waxay iminka gacanta ku hayaan 70% dhulkii ay fallaagada xukumi jireen ee bariga Xalab.
Dhinaca kalena, dad badan ayaa la sheegayaa inay u baahan yihiin gargaar, kuwaasoo ku sugan deegaannada weli gacanta ugu jira fallaagada, halka tobanaan kun oo qof ay u soo qaxeen goobaha ay dawladdu gacanta ku hayso.